Me, Me, Me uye Zvemagariro Media | Martech Zone
Me, Me, Me uye Zvemagariro Media
Muvhuro, June 22, 2009 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Dzokorora… hazvisi zvako!
Nguva imwe neimwe pandinotaura pasocial media, panogara paine vashoma vanoshamisika vatori vechikamu vanoshamisika kuti sei ivo Panofanirwa kuve nekufunganya pamusoro pekuti vachazvifambisa sei, nguva irikubatanidzwa, zvakanakirei kwavari, uye kunetsekana kunoshamisa pamusoro pezvinhu zvakaipa zvingakonzerwa nekambani yavo. Kukanganisa kumwe chete kunogona kumisa bhizinesi kubva pakupinda munhau dzemagariro… uye zvinowanzoita.
Pane chimwe chiitiko chazvino, mumwe wevatori vechikamu aive nenguva yakaoma kunzwisisa kuti sei. "Sei zvisiri maYellow Mapeji?", Vakabvunza? "Ndipo pandinoenda!", Vakadaro.
Ndakapindura, "Nekuti urikuteerera kuti sei iwe basa, kupi iwe enda, uye sei iwe kutaurirana. Iwe hausi kutarisisa kune zvinodiwa nevatengi, maitiro evatengi, uye mitsva yemari yemari iri kuvhura nenew media. Uri kufunga nezvazvo iwe. "Hausi kufunga nezvekwe tarisiro yako uye vatengi vako vatove kana kwavari kuwedzera huwandu."
Yako tarisiro nevatengi vari pane dzekutsvaga injini ... uri iwe mune zvawanikwa? Yako tarisiro uye vatengi vari kukumbira rubatsiro paLinkedIn… uri kuteerera ipapo? Yako tarisiro uye vatengi vari kutaura nezvako paFacebook neTwitter. Uri kupindura here? Kana urikungosaina chete kunotevera Twitter scam yekuwedzera 10,000 vateveri.
Kuwedzera pasocial media kune yako yekushambadzira arsenal inowedzera zvimwe kuomarara? Zvichida! Ukasaibata zvakanaka, rinogona kuve rakawandisa basa. Kana iwe ukaishandisa zvisiri izvo, inogona kunge iri njodzi. Kana iwe ukachiwedzera icho, zvakadaro, chinogona kubereka.
Kamwe poindi yacho payakataurwa, mwenje wakabatidza uye uyu aipinda akave anofarira nezve mikana. Bhizinesi rako rinofanira kuve rakadaro! Pane toni yemukana kunze uko. Kwira mungarava!
SEO: Kuva muMhedzisiro ingori Hafu yeHondo
Kuita Amazon S3 yeWordPress Blogs
Jun 22, 2009 pa 4: 35 PM
Zvese ndezvechokwadi. Nekudaro, ini handizive kuti nderudzii rwevatori vechikamu iwe uripo, asi chero munhu anofunga kuti Mapeji Matsvuku akakosha?
Mabhizinesi anotya izvozvi, nekuti mari iri kutsakatika. Zvakare ivo vanotya nezve kumisikidza vezvenhau. Murairidzi wavanoshandira kuti avabatsire pamari here?
Uye kushandisa Webhu kuti uone kuti ungazviita sei? Zvakanaka pane mamirioni geeks asina bhizinesi pfungwa kune yega yega zvechokwadi bhizinesi savvy Internet kushambadza nyanzvi.
Kutya kwavo ndekwechokwadi. Havana kubwaira. Vadzidzisei…
Ah, uye wanga uchiziva here, zvirinani kuti 'blog' yafa, yekushambadza zvirinani. Ichi ichokwadi here?
Kana zvirizvo, izvi zvese zvemagariro media kutyisidzira kunofanirwa kuve chikonzero nei.
Jun 23, 2009 pa8: 53AM
Sezvineiwo nechero svikiro, kuchine zvimwe zvakanakira (shingairira kuti nditi) kushambadza muYellow Mapeji. Rangarira kuti kune huwandu hwakawanda hwevakwegura vasiri paNet. Kana ini ndaishuvira kunongedza ivo, ini ndinogona kuyedza iyo Yero Mapeji.
Kana iri blog iri 'kufa', ndinofunga chirevo chisingadaviriki. Blogs izvozvi zviri kubatanidzwa nekukurumidza zvakanyanya mune yega yega webhu zano kupfuura nakare kose. Blogs uye organic zvigadzirwa zvematanho zvakakura kuva maturu anoshanda kwazvo ekutsvaga organic yekutsvaga. Mazhinji emabhizinesi haablogi kushambadzira - isu tichaona kudzoka mune izvo. YOSE imwe yekushambadzira svikiro iri pasi gore pamusoro pegore kunze kwekutsvaga kwekutsvaga.
Kutenda nemhinduro! Tarisira mberi kubatanidzwa kwako zvakare munguva pfupi.
Jun 23, 2009 pa9: 08AM
Ini ndinobvuma kuti blogging inzira huru yekukwidziridza SEO, uye kuti inofanirwa kuverengerwa mukuyedza kwekushambadzira. Nekudaro, ndedzipi mhando dzereferenzi dzaunadzo dzekutsigira izvo zvirevo zvekuti "mablog ari kuunganidzwa nekukurumidza zvakanyanya kune yega webhu zano kupfuura kare"? Zvakare ne "mabloggi marongero akura kuita maturu anoshanda kwazvo ekutsvaga kutsvaga kwehupenyu"?
Zvekare, ini ndinobvumirana kune chikuru chikamu neako kutaura kwako, asi zvirevo zvinoita kunge zvine simba zvishoma uye zvinoita kunge zvinotakura rusarura navo.
Ingoziva kuziva kana iwe uchikwanisa kunditungamira kune kumwe kuverenga uko kuchapa kuwedzera kuvimbika kune zvako zvirevo. Ndatenda.
Jun 24, 2009 pa 1: 22 PM
Unogona kugara uchiongorora iyo Mamiriro eBlogosphere. Yangu maviri masendi ndeyekuti iwe unofanirwa kutarisa kutsikisa saiti enhau makuru uye iwe uchawana yavo Yemukati Management Sisitimu yakagadziridzwa kuisa mablog. Kukura kwebhizimusi uye blogging iri zvakare pakukwira kwakakura… kubhadhara pakudzvanya kuri pasi uye kutsvaga kwehupenyu kuri kumusoro. Kune akakwirisa ekushandurwa kwemitengo uye inotevera ROI mune organic traffic - uye blogging ndiyo inodhura mhinduro yekuwana organic makero.
Jun 23, 2009 pa6: 29AM
Wow, iyi s ruzivo runobatsira. Ini ndinobvuma hazvisi zvangu. Hupenyu hwemagariro. hehehe
Jun 23, 2009 pa 12: 26 PM
Yakakura info. Ndinoonga mazano akanaka. Kushambadzira paInternet ndechimwe chezvinhu izvo munhu anonyatsoda kutsvagurudza kuti awane bhaidhi yavo.
Chengetedza iyo info kuuya!
VP Kushambadzira, Internet Kushambadzira Muzvinafundo